हिमालयन बैंकको नाफा बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति? – online arthik
हिमालयन बैंकको नाफा बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति?
शुक्रबार, साउन २९, २०७८ | १२:४२:१९ |
हिमालयन बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ भने खुद नाफा बढेको छ। असार मसान्तसम्ममा बैंकले २ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.९० प्रतिशत बढी हो।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेपनि अन्य सञ्चालन आम्दानी बढेका कारण खुद नाफा बढ्न पुगेको हो।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २१.४३ प्रतिशत घटेको छ भने खुद फि तथा कमिशन आम्दानी १.६८ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, बैंकको सञ्चालन मुनाफा २६.२७ प्रतिशत बढेको छ। बैंकको इम्पेरमेन्ट चार्ज समीक्षा अवधिमा साढे ३० करोडबाट घटेर साढे १४ करोड पुगेको छ।
सो अवधिसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा २ अर्ब १६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण चुक्ता पूँजी बढाएको यस बैंकको यस्तो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा ४६ पैसा बढेर २८ रुपैयाँ ६ पैसा पुगेको छ। सो अवधिसम्ममा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १७.२५ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १८७ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको जगेडा कोष १४.३५ प्रतिशत बढेको छ भने निक्षेप १२.५८ प्रतिशत र कर्जा २३.८९ प्रतिशत बढेको छ।